You searched for धनी व्यक्ति - Page3of5- Tech News Nepal Tech News Nepal
एलन मस्कको एउटा ट्वीटले फेरियो सिग्नलको भाग्य, एक करोड बढी डाउनलोड
काठमाडौं । टेस्ला तथा स्पेसएक्सका सीईओ एलन मस्कको एक ट्वीटले पछिल्लो केही दिनयता मेसेजिङ एप सिग्नलले छुट्टै चर्चा बटुलिरहेको छ । मस्कको उक्त ट्वीटको प्रभाव उक्त एपको डाउनलोडमा देखिएको छ
एलन मस्कको एक ट्वीटले ११०० प्रतिशतले बढ्यो सिग्नलको शेयर !
काठमाडौं । ह्वाट्सएपले नयाँ नियम तथा शर्त लागु गरेसँगै ह्वाट्सएपको आलोचना सुरु भएको छ । हालसम्म सबैभन्दा प्रभावकारी र सुरक्षित एपको रुपमा परिचित हुँदै आएको ह्वाट्सएपको नयाँ शर्तअनुसार अब प्रयोगकर्ताको
ह्वाट्सएपको दादागिरी बढेसँगै प्रयोगकर्ता सिग्नलतर्फ आकर्षित
काठमाडौं । ह्वाट्सएपको नयाँ नियम तथा शर्तले प्रयोगकर्तामाझ मुस्किल पैदा गरिदिएको छ । यसबाट प्रयोगकर्ताबीच एक किसिमको संसय पैदा गराएको छ । परिणाम स्वरुप कतिपय प्रयोगकर्ता ह्वाट्सएपको अर्को विकल्प खोज्न
टेक जायन्ट सामसङ ग्रुपका अध्यक्ष लीको निधन
काठमाडौं । विश्वको ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सामसङका अध्यक्ष ली कुन हीको निधन भएको छ । ७८ वर्षको उमेरमा आज उनको निधन भएको हो । लीले आफ्नो बुबाले सुरु गरेको सानो
Published On : 25 October, 2020
जिओका मुकेश अम्बानीले यसरी जिते मोबाइल डेटाको ‘प्राइस वार’
काठमाडौं । चार वर्ष अघिकाे कुरा हाे । एसियाका अहिलेका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीले फोरजी मोबाइल नेटवर्क सार्वजनिक गरे । तेल कारोबारबाटै अचम्मकाे शिखर चुमेका अम्बानीले मुम्बईमा फोरजीको सफ्ट
Published On : 11 October, 2020
स्टार्टअपको तितो यथार्थः अमेरिकामा बेजोस, नेपालमा बिजोग !
तस्वीरमा हालै दुई सय अर्ब डलर सम्पत्तिको किर्तिमान राख्न सफल अमेजनका मालिक जेफ बेजोस र दायाँतर्फ प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मःमः को अनलाइन डेलिभरी दिने स्टार्टअप डल्लेका कर्मचारी । दरबारमार्गमा रहेको
जेफ बेजोस बने २०० अर्ब डलर सम्पत्ति भएको विश्व इतिहासकै पहिलो धनाढ्य
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेफ बेजोससँग सम्पत्तिको यति धेरै रास थुप्रिएको छ कि जति उनीसँग यस अघि कहिल्यै थिएन । फोर्ब्सको करिब चार दशकदेखिको गणनामा बेजोसले यस्तो कोशेढुङ्गा
कोभिडको त्रासले छोएन एप्पललाई, बन्यो २ ट्रिलियन डलरको पहिलो अमेरिकी कम्पनी
काठमाडाैं । कोभिड-१९ काे महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलै हलचलको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कतिपय कम्पनीको आर्थिक अवस्था नाजुक बनिरहेकाे छ । तर, यही समयमा विश्वका धनी व्यक्ति तथा
Published On : 20 August, 2020
अहिलेको शिक्षा प्रणाली नै फेर्न जरुरी छ
कोभिड १९ को विश्वव्ययापी महामारीका कारण विगत पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । सूचना प्रविधिको अहिलेको युगमा अन्य मुलुकहरुले शैक्षिक गतिविधि सुचारु राखे पनि
Published On : 19 August, 2020
मार्क जुकरबर्गकाे हराएकाे डायरी
स्टेभेन लेभी मैले मार्क जुकरबर्गलाई २००६ को मार्च महिनामा पहिलोपटक भेटेको थिए । त्यो समय म न्युज विकमा नेतृत्वदायी प्रविधि लेखक थिएँ । त्यस समय म वेब टू प्वाइन्ट जेरोमा
Published On : 22 February, 2020
भारतकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका मुकेश अम्बानीले आफ्ना इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई सित्तैमा फोरके टेलिभिजन उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसअघि ‘रिलायन्स जियो’ ब्रान्डमा निःशूल्क ब्रोडब्यान्ड उपलब्ध गराएर भारतीय इन्टरनेट बजारमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘मेटाभर्स’ को बारे चर्चा भइरहेको छ । विशेषगरी फेसबुकले मेटाभर्सको विकास गर्नको लागि लगानी गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि यसको चर्चा चुलिएको छ । यसैबीच फेसबुकले मेटाभर्सको